Naya Drishti | "मंसिर लाग्यो, के छ बिचार ? यो मंसिरमा घरमा बुहारी भित्र्याउनै पर्छ ।' - Naya Drishti "मंसिर लाग्यो, के छ बिचार ? यो मंसिरमा घरमा बुहारी भित्र्याउनै पर्छ ।' - Naya Drishti
मंसिर ०६, सल्यान । नेपाली पात्रोमा जब मंसिर महिना नजिकिन थाल्छ तव आआफ्नो साहिनो अनुसारको माग राखेर बिबाहको लागी योग्य भएका युवा युवतीहरू लाई छेड हान्ने, जिस्काउने र बिबाहको लागी दबाब दिनेहरूको कमि हुदैन ।
साथिभाईहरू भन्न थाल्छन – “मंसिर लाग्यो, के छ बिचार ? यो मंसिर खेर जानदिनु हुदैन है । यसपालिको मंसिरमा त हामीलाई बिहेको पार्टी चाहिन्छ ।”
वुवाआमा, काकाकाकी, फुपुफ्वाजु दिदिभिनाजु भन्न थाल्छन – “यो मंसिरमा घरमा बुहारी भित्र्याउनै पर्छ ।” कसैलाई ज्वाइ चाहिएको हुन्छ । कसैलाई भिनाजु । भाउजू ल्याउनु पर्यो भन्ने भाइ बहिनीहरू उत्तिकै हुन्छन ।
उता बुढा हजुरबुबा हजुरआमा भन्न थाल्छन – यहि नाती / नातिनीको बिहे हेरेर,मर्न मन छ । यसको बिहे गर्न पाए ढुक्कले सास जान्थ्यो । यस्तै यस्तै ।
चिया गफ, भेला जमघटहरूमा पनि मंसिर र बिबाहको को प्रसंग छुट्दैन । सामाजिक संजालमा झन अनेकौं ट्रोल देख्न पाइन्छ ।
हाम्रो संस्कार, परम्परा र समाजमा पनि बिशेशगरि मंसिर महिनालाई बिबाहको महिना पनि भनिन्छ । प्राय : बिबाहको लागी धेरै शुभ लगनहरू हुने भएकाले बिबाहको लागि मंसिर महिना प्रसिद्ध रहेको छ । यस्तो लाग्छ – बिबाह र मंसिर पर्यावाची शब्द जस्तै ।
प्रायः बिवाहका लागि उमेर पुगेका युवा त युुवतीहरुको सोचाई हुन्छ – यो मंसिरमा बिबाह गर्छु । प्रेम सम्बन्धमा रहेर बिबाहको सोच बनाएका जोडिहरू पनि उपयुक्त महिना र लगनको प्रखाइमा रहेका हुन्छन ।
धर्मप्रति आस्थावान रहेकाका लागि त झनै लगन नभई हुदैन । भागी बिहे गरेका हुन् या मागी बिहे गर्ने सोचमा रहेका हुन् प्राय सबै बिहेको लगन हेरेकै हुन्छन् । मंसिर आफैमा उत्सब जस्तो लाग्छ ।
यो वर्ष मंसिरपछि विवाहको लगन नै छैन
बिगतका बर्षहरूमा महिनाका हिसाबले सबैभन्दा बढी बिबाह गर्ने भनेको मंसिर,माघ र फागुनमा हो । माघ र फागुनमा समेत विवाहको मुहूर्त हुन्थ्यो । तर यसबर्ष माघ र फागुनमा बिहेका लगन नै छैनन् ।
पात्रो अनुसार, यो वर्ष मंसिरपछि विवाहको लगन नै छैन । माघ र फागुनमा वृहस्पति एवं शुक्र ग्रह अस्त हुने भएकाले विवाहको लगन ननिस्किएको हो ।
यस वर्ष जेठ १७ गते शनिबार पश्चिममा शुक्र अस्त भई २६ गते सोमबार पूर्वमा उदय हुन्छ । यसैगरी, माघ ४ गते आइतबार वृहस्पति पश्चिममा अस्त भई फागुन २ गते आइतबार नै पूर्वमा उदाउने छ ।
माघ ३० गते शुक्रबार शुक्र पूर्वमा अस्त भएपछि २०७८ लागेपछि मात्र उदाउने भएकाले यस वर्ष माघ र फागुनमा विवाह एवं व्रतबन्धका साइत छैनन् ।
चैतमा व्रतबन्धको साइत नै छैन । बृहस्पति गुरु,शुक्र अस्त भएका बेला गृहप्रवेश, घर निर्माण आरम्भ गृहआरम्भ, सप्ताह श्रवण, यज्ञयागादिलगायत शुभकर्म पनि गर्नुहुँदैन ।
गुरु, शुक्र अस्तका बेला नित्य रूपमा गरिने पूजा, पाठ, जप आदि गर्नुहुन्छ, यसैगरी नैमित्तिक रूपमा गरिने श्राद्ध, काजक्रिया, बालक जन्मँदा जातकर्म गर्नुहुन्छ, कुनै फलको कामना राखेर गरिने काम्य कर्म गर्नु हुँदैन, यसैले विवाह, व्रतबन्ध, गृह प्रवेश, गृहारम्भको साइत नदिइएको बताइएको छ ।
यो बर्ष किन बिबाहका लगन कम भए ?
२०७७ सालमा वर्षभरिमा जम्मा १८ दिन मात्र साइत रहेको नेपाल पंचाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार असोजमा मलमास परेकाले विवाहको लगन पनि कम परेको हो । असोजमा मलमास परेको र मंसिरपछि वृहस्पति र शुक्र अस्ताउने भएकाले माघ र फागुनमा विवाहको लगन नभएको उहाँको भनाई छ ।
मलमासमा विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्रशान लगायत शुभ काम गर्न नहुने धार्मिक विश्वास छ । मलमासकै कारण २०७७ सालको दशैँ र तिहार पनि झण्डै एक महिना पर धकेलिएको थियो।
मलमास नपरेको बेलामा दशैँ सामान्यतया असोज पहिलो हप्ता सुरु हुन्छ ।